.: Top10 WALL-E Hacks
Top10 WALL-E Hacks
27.06.2008 တုန်းက ရုပ်ရှင်ရုံမှာ တင်ဆက်ပြသသွားတဲ့ နာမည်ကြီး Wall E ဇာတ်ကားလေးကတော့ လူတိုင်းအတွက် အသိပညာပေးကားလေးတစ်ခုပါ။ အဲ့ဒီကားဟာ ၂၀၀၈ခုနှစ်အတွက် ၈၁ကြိမ်မြောက် အကယ်ဒမီ ဆုပေးပွဲမှာ အကောင်းဆုံး Animated Feature ဆုကို ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Best Original Song, Best Original Score, Sound Mixing, Sound Editing and Best Original Screenplay ဆုတွေအတွက်လည်း စကာတင် စာရင်းသွင်းခံရပါသေးတယ်။
Director Andrew Stanton (Right Side) and Victor Navone holding the Academy Award for best animated feature
ဒီကားလေး ဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက် ပါဝင်ခဲ့ကြသူများကတော့ -
Written by Story: Andrew Stanton , Pete Docter
Screenplay: Andrew Stanton , Jim Reardon
Starring : Ben Burtt , Elissa Knight, Jeff Garlin, Fred Willard, John Ratzenberger, Kathy Najimy, Sigourney Weaver, MacInTalk
Editing by : Stephen Schaffer
Release date : June 27, 2008 (USA), July 18, 2008 (UK), September 18, 2008 (AUS), (NZ)
Budget : US$180 million
Gross revenue : $521,268,237
ဒါကတော့ ဒီကားလေး ဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက် နောက်ကွယ်ကနေ ကြိုးစားခဲ့ကြပုံတွေပါ။
ဒါလေးကို ကြည့်ပြီးသွားရင် သင်ကိုယ်တိုင်ရော သင့်ရဲ့ Laptop မှာ မစမ်းကြည့်ချင်ဘူးလား ? :))
9. LEGO WALL-E (WALL-E စက်ရုပ်ဆက်ကြမယ်)
mini-computerလေးကတော့ touch screen အဖြစ် အသုံးပြုလို့ရပြီး သီချင်းများနားထောင်လို့ရခြင်း ၊ သူ့မျက်လုံးနေရာကနေ web cam ဖြင့် ချပ်တင်းပြုလုပ်နိုင်ခြင်းပြုလုပ်လို့ရပါသေးတယ် အသေးစိတ်ကို ဆက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
2. WALL-E Wood (Home Made) Model Robot
Wall-E Robot တည်ဆောက်ပုံ : Homebuilt Project Step By Step Digest
Src : Hacked gadgets , http://en.wikipedia.org/wiki/WALL-E
ဒီကားကို မကြည့်ရသေးသူများအတွက် ဒီနေရာလေး ကနေ စတင်ဒေါင်းပြီး ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Posted by Waing at 11/18/2009 02:00:00 PM
အစ အဆုံးတော့ မကြည့်ဖူးဘူး
နည်းပညာတွေက မြင့်မားလာသလို ပညာရှင်တွေ အတွက်လည်း ထိုက်ထိုက်တန်တန် အားပေးမှု မျိုးရတော့ နောက်အနာဂါတ်မှာ ဒီ့ထက် တိုးတက်မှု တွေ မြင်ကြရအုံးမှာပဲ....။
ကိုယ့်ရှေ့ခေတ်က သေသွားတဲ့သူတွေကို သနားမိသေး တယ်။ ဒါမျိုးတွေ မမြင်လိုက်ရလို့ပေါ့..။
အဲဒီလိုပဲ နောင်တခေတ်ရောက်ရင်လည်း ကျနော်တို့ ကို နောက်လူတွေက သနားနေကြအုံးမလားပဲနော်
ဒီကားလေးထဲက စက်ရုပ်လေးကို အပြင်မှာတွေ့တွေ့ဖူးတယ်။သာမာန်စက်ရုပ်လေးလို့ ထင်နေမိတာ။ ညီမရေးတာဖတ်ရတော့မှ သူ့အကြောင်းလေးကော၊ သူရုပ်ရှင်ကားရော ကြည့်ဖူးသွားတော့တယ်။ ပျော်ရွှင်ပါစေညီမရေ။ ခရီးထွက်ရာမှ ပြန်လာလို့ ညီမစာတွေ အခုမှ ဖတ်ရမှာ။
၀ိုင်းပြောမှ ဘဲ အစကပြန်ကြည့်တော့မယ် . . . ဒေါင်းက
မဲ့ လင့်လေးပေးထားတာ ကျေးဇူးပါဘဲ . . .
အိမ်ရောက်ရင် ကြည့်မယ် ..း))